SYLVESTER STALLONE Nisy nitory ho mpanolana
Filoha Frantsay Mitsidika an’i Etazonia
Vehivavy iray no nametraka fitoriana amin’ny fitsarana any Santa Monica,
Californie-Etazonia mitaraina fa nanolana azy i Sylvester Stallone fantatra tamin’ny solon’anarana Rocky na Rambo, amin’ny sarimihetsika. Tany amin’ny taona 1990 no nambaran’ilay ramatoa mpitory ho nitrangan’io fanolanana io. Nanamafy ny fisian’io fitoriana io ny lietnà Saul Rodriguez, mpiaro an’i Sylvester Stallone, saingy nilaza fa rediredin’olona te halaza an-gazety fotsiny ny an’io ramatoa io.
Nahavita fiaramanidina goavambe
Fiaramanidina miantsona ambony rano na karazan’irony “hydravion” irony izy ity, ary "Kunlong" no nataon-dry zareo Sinoa anarany. Mirefy 38 metatra ny halavany, afaka misidina mandritra ny 12 ora eny amin’ny habakabaka ary mahazaka olona 50. Natao indrindra hamonjena voina an-dranomasina ary koa hamonoana afo raha misy doro tanety ity fiaramanidina ity, ary izy no lehibe indrindra amin’ireo “hydravion” misy hatreto.
Valo lahy no mifehy ny harena manerantany
Bill Gates, Armancio Ortega, Warren Buffet, Carlos Slim, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Larry Ellison ary Michael Bloomberg ireo valo lahy mpanankarena indrindra manerantany. Mampiasa olona 1,2 tapitrisa ny orinasan’izy ireo ary tombanana eo amin’ny 3,6 miliara dolara ny haren’izy ireo, izany hoe mihoatra ny fananan’ny 50%-n’ny olona manerantany, araka ny tatitra nataon’ny Oxfam. Teratany amerikanina ny 6 amin’izy ireo, Espaniola ny iray ary Meksikanina ny iray.